Avy any anaty tahiry: Ataovy tsotra ny fanoratrao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jolay 2019 7:44 GMT
Avy any amin'ny US Navy ilay fanafohezan-teny hoe KISS (Keep It Simple, Stupid! “Ataovy Tsotra Ry Vendrana ah!) fa matetika tononin'ireo mpanoratra. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr Hey paul Studios. CC BY 2.0
Angona ahitana ireo fomba fanao tsara indrindra amin'ny resaka fanoratana sy fanaovana tatitra ato amin'ny Global Voices ireo Torohevitra Isankerinandro Momba Ny Fanoratana. Atolotry ny lehiben'ny mpanonta vaovao, Lauren Finch ho anao ireo torohevitra ho an'ny volana Novambra.
“Raha toa ka zava-dehibe izany, mendrika ny haseho amin'ny fomba mazava sy tsotra, mba hahafahan'ny rehetra mahatakatra izany.” -Dustin Wax
Taorian'ny roa taona nihoatra nisian'ireo Torohevitra Isankerinandro Momba Ny Fanoratana teto amin'ny Global Voices, manao jeritodika ny lasa izahay. Nizara torohevitra mamiratra nandritra izany fotoana izany ireo mpanonta lahatsoratra tato aminay. Ao anatin'ity lahatsoratra ity, ndao hanadihady ireo tombontsoa azo avy amin'ny fanoratana amin'ny fomba tsotra, toy ny itantaran'i Firuzeh, Kevin sy Mahsa azy.
Avy amin'i Firuzeh Shokooh Valle, mpanonta lahatsoratra amin'ny teny Espaniola:
Amin'ny fanoratra akademika, afaka mahita fiteny manokana isika na aiza na aiza (na dia tsy tokony ho izany aza). Amin'ny fanaovan-gazety, mifanohitra amin'izany, ny fiteny manokana — na ny fampiasana ireo teny “be pitsony” kokoa — dia tsy heverina ho toy ny marika fahaizana sy fifehezana. Matetika tsy dia tsara ny fahitana ny fiteny manokana satria ny fanaovana gazety tsara tsy maintsy mazava sy mahafintina tsara. Ato amin'ny GV, tena zava-dehibe manokana izany satria manoratra ho an'ny mpamaky avy amin'ny firenena maromaro izahay.
Ito misy ohatra iray mahaliana avy amin'ny Language Corner ao amin'ny Columbia Journalism Review:
Tao anatin'ny matoandahatsorany, nangataka hetsika momba ny rafitra 911 rejionaly, izay hanome refim-pahombiazana mafy fototra sy mangaraharaha manerana ny firenena”, ankoatra ireo zavatra maro hafa, ny ben'ny tanana.
Any amin'ny sehatry ny asa ihany no ampiasana ny teny hoe “refy”, fa nihataka kokoa izy tamin'ny fanaovan-gazety nentim-paharazana (sahinay lazaina hoe fanametarana), izay hifanantonan'ireo mpanao tatitra an-gazety sy hiresahan'izy ireo mikasika ny “fametrahana refy mazava mba hahatratrarana” ireo fampihenana ny fahantrana manerana ny tany, ary koa “refy mivoatra any anatin'ny filalaovana baskety eny amin'ny oniversite.” Mety hiasa tsara toy izany koa ny “Fametrahana tanjona” sy “antontanisa”, ary tsy ilàna ireo mpamaky hiditra amin'ny rafitra iray fandrefesana.
Ao anatin'ny GV Style Guide natolotray ihany koa izay!
Avy amin'i Kevin Rothrock, mpanonta lahatsoratra ao amin'ny RuNet Echo:
Rehefa manoratra tantara, miezaha foana ny ho fohy teny. Aza mampiasa teny saro-takarina, teny sarotra ary indrindra ireo teny tsy ilaina. Manome ity ohatra hiran'ankizy taloha ity i Harold Evans tao anatin'ny “Essential English”:
Raha nanana ondry aho tsy handeha aho
Mihevitra ve ianao fa handaka azy aho, a a a.
Hanome katsaka azy aho ary hikikiaka hoe
“Oee,”“Alefa , Neddy a.”
Ary avy eo, asehony ny fomba mety hanimban'ny mpanoratra vaovao maro izany :
Raha nanana ampondra tsy mety mandeha aho,
Heverinao fa tokony hanafay azy ve aho, tsia, mba marina.
Tokony hanome serealy azy aho ary hijery
Tohizo Edward a.
Lava be ny lisitr'ireo “teny tsy ilaina”, fa mba hanomezana anao hevitra mikasika ny zavatra ao anatin'izy ireny, ireto misy ohatra vitsivitsy amin'ny zavatra mety ho hitanao anatin'ireny lisitra ireny:
Lazao hoe “tataka sy mangana” fa tsy hoe “fahakiakana sy fihandronan-dra.”
Lazao hoe “momba ny ” na “eo amin'ny” fa tsy hoe “mikasika ny .”
Lazao hoe “tsy hoe ela” fa tsy hoe “ao anatin'ny fotoana akaiky.”
Lazao hoe “fanalefahana” na “fanampiana” fa tsy hoe “fanamorana.”
Avy amin'i Mahsa Alimardani, mpanontana lahatsoratra any Iràna:
Ataovy tsotra ny fanoratra, ary ialao ireo endrika sarotra sy teknika ara-pitsipi-pitenenana natao hampitolagaga ireo mpamakinao. Aza mandavo tena amin'ny fampiasana fitsipi-pitenenana sy rafitra sarotra be mba hisehoana hoe mahay, satria afaka mahazo antoka ianao fa hianjera koa ireo mpamaky. Ity resaka notsidik'i Kurt Vonnegu mikasika ny fampiasana ireo teboka amam-paingo ity angamba no fanazavana tsara indrindra amin'izany.
“Ity misy lesona amin'ny fanoratana misy fahaizamamorona. Fitsipika voalohany: Aza mampiasa teboka amam-paingo. “transvestite hermaphrodites” izy ireny ary tsy midika na inona na inona. Ny hany zavatra ataon'izy ireo dia ny mampiseho hoe tany amin'ny oniversite ianao.” – Kurt Vonnegut
Andininy iray tsara manazava ny antony anaovana fanahy iniana mampiasa ireo teboka amam-paingo:
“Eny tokony, Kurt Vonnegut: soatoavina tsy azo alana ny fahatsorana, na amin'ny fitsipi-pitenenana na amin'ny zavatra hafa. Fa tsy afaka iombonako hevitra ny hoe tsy misy dikany ny teboka amam-paingo; amiko izy ireny dia midika fahafinaretana azo avy amin'ny fahatsapana fa tsy tokony horaisina tsy am-piheverana ireo torohevitra rehetra amin'ny fanoratana, na mahery, na tiana tahaka ny inona aza ny mpamorona azy.” – Bel Dolnick, tao anatin'ny Kurt Vonnegut sy ny teboka amam-paingo tao anatin'ny New York Times.